Napoli oo ku soo biirtay loolanka loogu jiro Isco oo Gadood ka ah Real Madrid | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Napoli oo ku soo biirtay loolanka loogu jiro Isco oo Gadood ka ah Real Madrid
Published on November 29, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(30-11-2018)Manchester City iyo Chelsea ayaa u muuqda inay ku hungoobayaan tartanka ay ugu jiraan xiddig ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid, kaddib markii ay loollanka soo gashay Napoli oo uu hoggaaminayo Carlo Ancelotti.
Tababaraha Talyaaniga ah ayaa xidhiidh dhow la leh xiddig khadka dhexe ah oo aann cago adag ku joogin Real Madrid, isla markaana toddobaadkan ay isku dhaceen tababare Santiago Solari.
Sida uu qoray wargeyska Don Balon ee kasoo baxa dalka Spain, Chelsea, Manchester City iyo Arsenal ayaa dhamaantood xiisaynaya Isco oo ay u egtahay inuu soo gaabanayo cimrigiisa Santiago Bernabeu, hase yeeshee laacibkan ayaa ka degi doona waddanka Talyaaniga kaddib markii uu tartanka kusoo biiray tababarihii hore ee Real Madrid, Carlo Ancelotti oo hadda macallin u ah Napoli.
Isco oo ay da’diisu tahay 26 jir ayaa uu tababare Solari ka tirtiray liiska ciyaartoyga Real Madrid ka hor kulankii Roma, halkaana waxa ka dhashay khilaaf uu laacibkani isku dayey inuu macallinka weydiiyo sababta, laakiin tababaraha ayaa u sheegay inuu go’aanka gaadhay.
Markii ay ciyaartaasi dhamaatay ayaa la weydiiyey Solari sababta keentay in Isco oo ka mid ah laacibiinta ugu wanaagsan ee Real Madrid haysato uu ugu soo dari waayey illaa ciyaartoyga kaydka ah, waxaana uu sheegay in go’aankiisu ku salaysnaa arrin gaar ah oo uu waqti gaar ah gaadhay.
Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta Spain ayaa Arbacadii magacaabay dhawr kooxood oo Isco ku biiri karayo marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyga ee xagaaga, waxaana ugu hadal hayn badan Manchester City oo uu joogo Pep Guardiola oo xiiseeya Isco.